Auto Auto Valve Valve Cover Gasket OEM 22441-2B002 Mpanamboatra sy Factory | Huimao
Habe: Standard sy namboarina
Serivisy: OEM Serivisy azo alaina
Gasket fonosana valizy dia fonosana vy izay eo an-tampon'ny motera. Cork na gasket vita amin'ny kofehy dia mamatotra ny fonon'ny valizy amin'ny motera. Ny fonosana valizy sy ny gasket dia manisy tombo-kase ny tampon'ny motera ary misoroka ny famoahana solika. Ny fonony dia azo esorina, mamela ny fidirana hanitsy ny valves. Noho ny hafanan'ny motera avo lenta dia mora manjary malemy sy mora vaky ireo gasket fonosana. Ny gaskets avo lenta misy antsika dia vita amin'ny akora tsy ho simba, hisorohana ny fivoahan'ny solika maotera.
Description Valve Cover Cover Gasket
OEM TSIA 22441-2B002
Size Standard sy namboarina
Fanodinana OEM / ODM
Fampivoarana ny kojakoja fiara nomen'ny mpanjifa
Ny fepetra ara-teknika sy ny fanohanana ara-teknika ny filan'ny mpanjifa
Andiana drafitra famolavolana feno ho an'ny tombo-kase fingotra sy ampahany ho an'ny mpanjifa
Auto serivisy serivisy fijanonana tokana
Momba an'i HUIMAO
Atrikasa famokarana HUIMAO
Xingtai Huimao Trading Co., Ltd, dia mpanamboatra sy mpamatsy vola amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny Jvlu Industrial Zone, Xingtai City, Hebei Province, mifantoka amin'ny sehatry ny famokarana faritra misy tombo-kase vita amin'ny kofehy sy menaka mandeha amin'ny fiara, toy ny tombo-kasen-menaka, O peratra, gasket, kirihitra, menaka motera, menaka manosotra sns. Mba hamatsiana ny mpanjifantsika vokatra avo lenta, ny injenieranay sy ny mpikaroka dia manararaotra sy manatsara ny teknolojia avo lenta tsy miankina eto amintsika amin'ny alàlan'ny firesahana ny teknolojia tombokase mialoha ny tombam-bidy. Ity fivoarana indostrialy ity dia mampiavaka an'i HUIMAO amin'ny fifaninanana masiaka na eto an-toerana na any ivelany. , izay traikefa lehibe indrindra sy fahombiazan'ny HUIMAO.
Ankoatr'izay, manana mpiara-miasa marobe izahay, izy rehetra dia mpanamboatra matanjaka izay niara-niasa nandritra ny taona maro, ary afaka mamatsy kojakoja maotera hafa, faritra fototra ary faritra amin'ny vatana, toy ny rafitra fandrehitra, filterr, bearings, rafitra frein, fampiatoana, Sns
HUIMAO dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana isan-karazany izay nanangona marika malaza eran-tany sy orinasa mitarika anatiny sy ivelany. Ny filaharan'ny vokatra ambony sy ny habetsaky ny vokatra dia nitombo isan-taona. Manana mpiara-miasa marobe izahay, mpanamboatra matanjaka avokoa izy rehetra izay niara-niasa nandritra ny taona maro.
Ny vokatray dia aondrana betsaka any Korea, Dubai, Iran, Brazil, Russia ary ireo firenena sy faritra maro hafa. Huimao dia manaparitaka hatrany ny kalitaon'ny vokatra hahazoana ny fankatoavan'ireo mpanjifa ary hitazona ny fampanantenany kalitao. Mino izahay fa ny fahitsiana dia mitondra fifampitokisana, ny benifit miaraka dia mahatonga ny roa ho mpandresy.
HUIMAO dia mandray anjara amin'ny fampiratiana isan-taona hahatratrarana fiaraha-miasa ara-teknika sy fifanakalozana amin'ny firenena isan-karazany, mba hiaraha-maniry.
Fitaterana sy famonosana entana
Antsipirian'ny fonosana: famonosana tsy miandany na famonosana tany am-boalohany na takian'ny mpanjifa
Fotoana mitarika: 5-7 andro amin'ny tahiry na 30 andro tsy ao amin'ny tahiry
Fomba fandefasana: amin'ny ranomasina, amin'ny alàlan'ny rivotra, amin'ny alàlan'ny mpitatitra
Fepetra fandoavana: T / T, hafa
Teo aloha: Auto Parts Spark Plug 90919-01210
Manaraka: Auto Parts Valve Cover Gasket OEM 22441-2G100
Engine 1rz Gasket
Engine 2c Gasket
Oil Seal OEM 12279-D0100 ho an'ny Nissan
Valve Cover Gasket FS01-10-235A
Auto Parts Spark Plug 90919-01210
Fizarana famehezana, Tombo-diloilo voasesika vy, Engine Parts, Tombo-kase vita amin'ny landy, Piesy detase, Clamping Element,